IBM sy United Airlines dia miasa amin'ny rindranasa iOS eo amin'ny sehatry ny orinasa | Vaovao IPhone
Efa ho roa taona lasa izay ny fifanarahana nifanaovan'ny IBM sy Apple, finamanana iray izay hahatonga an'i Steve Jobs ho antitra dia hangovitra mangatsiaka. Na izany aza, amin'izao fotoana izao dia mandeha tsara ny zava-drehetra. Ary io dia efa nanome tanana mihoatra ny iray tanana an'i Apple amin'ny asany i IBM. Na izany na tsy izany, IBM dia manam-pahaizana manokana amin'ny tontolon'ny orinasa, ary manohana ny famoronana lozisialy manokana ho an'ny fitaovana Apple amin'ity sehatra ity, izany no ataony amin'ny United Airlines. Ireo orinasa roa any Amerika Avaratra dia niara-niasa hamorona rindranasa iOS izay manampy ny mpiasan'izy ireo hanao tsara kokoa ny asanao.
Amin'izany fomba izany, ny fizarana IBM Mobile dia miasa mafy amin'ny famolavolana ireo rindranasa iOS ireo izay hanampy mpiasa maherin'ny 50.000 United Airlines hanatanteraka tsara ny asany ao an-trano. Ny fampiharana dia hamela ny mpiasa hamaha olana haingana kokoa, ary koa hifampiresaka mora foana. Ny iray amin'ireo lafiny mifandraika indrindra dia ny fampidiran'izy ireo fampiasa ho an'ny TouchID, ka manampy fepetra fiarovana hafa indray amin'ireo hetsika rehetra ataon'ny mpiasanareo.
Ny United Airlines dia manandrana manatsara ny traikefa tsara ananan'ireo mpandeha azy, koa miasa izahay hanompo azy ireo mandritra ny dingana rehetra amin'ny dia (manomboka amin'ny fidirana amin'ny fidirana mankany amin'ny toerana haleha). Izany no antony anaovanay fandraharahana amin'ny IBM Mobile, izay ahafahan'ny mpiasanay miditra haingana ny fampahalalana ilainy amin'ny findainy Apple, izay mahatonga ny fivezivezeran'ireo mpanjifantsika ho mahafinaritra kokoa - Dee Waddell, talen'ny fitsangatsanganana sy fitaterana ao amin'ny United Airlines
Ity fifanekena ity dia nambaran'ny IBM avy amin'ny tranonkalany. Araka ny efa nolazainay, ny fifanarahana teo amin'i Apple sy IBM dia nanomboka tamin'ny 2014, fifandraisana iray izay tsy isalasalantsika fa efa neken'i Steve Jobs, indrindra ny fandinihana ny sary mitarika ity lahatsoratra ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » About us » IBM sy United Airlines dia miasa amin'ny rindranasa iOS eo amin'ny sehatry ny orinasa